Agwaetiti Zanzibar nke ndị njem nleta amachibidoro ire mmanya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Agwaetiti Zanzibar nke ndị njem nleta amachibidoro ire mmanya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Nkwụsị nke ahịa mmanya na-aba n'anya agaghị emetụta ụlọ oriri na ọ touristụ touristụ ndị njem nleta dị elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-elekọta ndị ọbịa si mba ọzọ
Zanzibar akwụsịla mbubata, ịre ahịa na ị consumptionụ mmanya na-aba n'anya
Ọrịre biya, mmanya na mmụọ ga-adị naanị na họtel ndị na-eje ndị ọbịa ala ọzọ
Ọnọdụ akụ na ụba Zanzibar na-adabere na njem na azụmahịa mba ụwa
The Indian Ocean njem nleta agwaetiti nke Zanzibar akwụsịla mbubata, ọrịre na ị ofụ ihe ọ alcoụ alcoụ na-aba n'anya mgbe ọnwa nsọ nke ọnwa Ramadan wee jiri ịdọ aka na ntị kpụ ọkụ n'ọnụ nye ndị na-ebubata mmanya na mmanya na agwaetiti ahụ.
Zanzibar's Liquor Board Executive kwuru na ọkwa ya n'izu a na nkwụsị nke ahịa ihe ọ wouldụholicụ na-aba n'anya agaghị emetụta ụlọ oriri na ọ touristụ highụ ndị njem nleta dị elu na ụlọ ọrụ ntụrụndụ na ebe obibi ndị ọzọ na-elekọta ndị ọbịa si mba ọzọ.
Boardlọ ọrụ ahụ kwuru na mkpebi imechi ụlọ ahịa mmanya na-akọwa nke ọma na ngalaba 25 (3) (4) nke na-egbochi mbubata na ire mmanya n'oge ọnwa dị nsọ nke Ramadan.
Ọrịre biya, mmanya na mmụọ ga-adị naanị na ụlọ oriri na nkwari akụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eje ozi ndị ọbịa si mba ọzọ na-agagharị n'àgwàetiti ahụ.
A machibidoro mmachibido mmanya na-aba n'anya mgbe gọọmentị agwaetiti ahụ chọpụtara na ụfọdụ ndị mmadụ na ụlọ ọrụ, gụnyere ụlọ mmanya, na-emebi iwu ahụ site n'ịnọgide na-ere ma na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya n'oge ọnwa nsọ nke Ramadan nke a na-ahụ na agwaetiti ahụ.
Zanzibar bụ onye Alakụba buru ibu ma na ndị niile bi na ya ga-agbaso usoro Islam nke ibu ọnụ site na ụtụtụ ruo mgbede na Ramadan. Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ndị ahụ na-emechi emechi n’ehihie na mmadụ ole na ole nọ n’okporo ámá.
Ndi bi na ihe ruru nde mmadu 1.6, ihe omume Zanzibar na-adabere na njem na ahia mba ofesi.
N'ịkwado mpaghara ala ya na Oke Osimiri Indian, Zanzibar na-etinyezi onwe ya ugbu a iji soro mba ndị ọzọ agwaetiti na-eme njem na njem, mmanụ na mmiri ndị ọzọ.
Hotellọ nkwari akụ nke mba ụwa eguzobewo azụmahịa ha n'ime afọ ise gara aga, na-eme ka agwaetiti ahụ bụrụ otu n'ime ebe itinye ego maka ụlọ nkwari akụ na East Africa.
Onye isi oche Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwuru na gọọmentị ya na-achọ ugbu a ịdọta ndị ọzọ na-etinye ego na ọrụ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na njem nleta na-enwe olile anya ọhụrụ iji mee ka Indian Ocean Island bụrụ ebe egwuregwu ndị njem asọmpi.
Agwaetiti a bu ihe ndi njem nleta di elu, ya na ndi Seychelles, Mauritius, Comoro na Maldives gbara oso.
Njem njem nlegharị anya jikọtara agwaetiti ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ nke Indian nke Durban (South Africa), Beira (Mozambique) na Mombasa n'ụsọ osimiri Kenya.